Tag: email yakavhurika mwero | Martech Zone
Tag: email yakavhurika mwero
Isu tiri mafeni makuru ema automated maemail. Makambani haawanzo kuwana zviwanikwa zvekubata tarisiro yega yega kana mutengi kazhinji, saka maemail emagetsi anogona kukanganisa zvakanyanya kugona kwako kutaurirana nekurera vatungamiriri vako nevatengi. Emma akaita basa rakanakisa mukukwevera pamwe iyi infographic pamusoro yepamusoro 5 inoshanda kwazvo otomatiki maemail kutumira. Kana iwe uri mumutambo wekushambadzira, iwe unotoziva kuti otomatiki ari
Izvo hazvisi kuwana zvakapusa pane iyi infographic kubva kuContentLEAD. Tarisiro inoputirwa neemail nekuda kwemutengo wakaderera pamutungamiri uye yakanyanya kutendeuka mwero. Asi izvo zvinoratidzira dambudziko hombe… yako email inorasika muinbox pakati pemazana kana zviuru zvemamwe maPush ekushambadzira mameseji. Chii chaunogona kuita kusiyanisa yako email kutaurirana kubva kuvanhu? Heano zvinhu zvishanu mukati meatomia yeemail meseji pamwe nekukanganisa